Waxaan mashaariicda naga dari koob qoraalka si ay u sheegaan wax maqlayaan, iyagu ma ay fahmi karaa on iyaga u gaar ah, sida horyaalka oo ka mid ah barnaamijka, magaca qofka faahfaahinta farsamada ah oo ku saabsan maaddo ku hadla, ama.
Final Cut Pro X ayaa ku dhawaad ​​200 oo saamayn qoraal kala duwan oo aan ku dari kartaa, laakiin habka ee ku daray koob muhiimad ahaan waa isku mid. Ku darista horyaalka waa waxa qodobkan ku saabsan tahay.
Just in uu na wada hayo ee bogga isku mid ah, halkan waa qeexidda tibaaxahaas muhiimka ah ee la xiriira qoraalka aan:
Text ama koob. Words kaalinta shaashadda. Waxaan u isticmaali ereyadan badadanaa.
Superimpose. Text soo bandhigay shaashadda la video kale waxaa hoos ku qoran. Waxaa kale oo loo yaqaan "supers" ama "furayaasha."
Full-shaashadda. Text oo degan screen oo dhan.
Hoose saddex-meelood meel. Text oo ku haboon ee hoos ku hadal qof; ee "hoose-saddexaad" ee shaashadda.
Info-muuqaallo kale. Text-Full screen kaas oo la superimposed on graphic ah, guud ahaan ay isticmaalaan macluumaadka farsamo gaadhsiin. Caadiga ah loo isticmaalo waa sports
statistics ama macluumaad kale Iyamaa hawl yar, si uu u gudbiyo isticmaalaya text badan cid erayada akhriyo.
Waxaan jeclaan lahaa inaan soo bandhigo "Yertle," waxa uu qubo badda iyo xiddiga qoraalkan. (Duuban mahadcelinayaan Jim Walker iyo aargoosato baxay Productions Wild.)
Sida ugu fudud, aan u isticmaalno horyaal in uu soo bandhigo inuu (ay?) Magaca.
In Timeline ah, gelin playhead meesha aad rabto in aad horyaalka si ay ugu muuqdaan iyo Shift nooca + Control + T. Tani durayo horyaalka hoose-saddexaad default ee booska uu ka playhead ah. Horyaalka, sida ku dhowaad dhammaan horyaal, ayaa muddo default of 10:00 ilbiriqsi ah.
Fiiri Browser oo la arko natiijada shaqadaada. A hoose-saddexaad horyaalka waxaa superimposed badan video ee geeska hoose ee bidixda. (Waxaan ka hadli doonaa formatting qoraalka ah weedho yar.)
FIIRO GAAR AH: xaddidaadda ugu weyn ee tan hoose-saddexaad horyaalka waa in kaliya la taagan karo ee geeska bidix. Waxaa loo guuro xarunta ama geeska midig u baahan tahay la qabsiga buuggan.
Waxaad booska ama jar horyaalka la mid ah sida wax video clip: jiidi clip si ay goobo kala duwan, ama jiidi gees ah si ay u beddelaan muddada.
Dooro horyaalka iyo u masixi adigoo riixaya furaha tirtirto.
Markan, nooca Control + T iyo screen-buuxa horyaalka default u muuqataa in xarunta ee shaashadda. Mar kale, tani waxay leedahay muddo default of 10 ilbiriqsi ah.
Haddii aad eegto midig ee xarunta of shaashadda, aad arki doonaa erayga "Title." Haa, ay darn dhow la arki karin. Iyo, haa, waxa ay u muuqataa, um, oo fool xun. Si kastaba ha ahaatee, waxaan heysanaa tan ah ee gacanta ku formatting si ay u fiirin tan hase ahaatee waxaanu doonaynaa.
Dooro iyo tirtirto in screen-buuxa horyaalka.
Waxaa ka mid ah habka aad u codsan horyaalka ah, waxayna jiidayeen ka Browser horyaal.
Riix icon Title ee Toolbar ka. Tan waxay ku tusaysaa waxyaabaha Browser Title ah. Column ayaa ku soo bandhigay bidix qaybaha horyaalka, calanka ku yaal dhinaca midig ayaa tilmaamaya horyaal oo shaqsi, sanduuqa raadinta hoose ee kuu ogolaanaya in aad raadiso horyaal gaar ah magac, halka tirada xaq hoose waxay muujinaysaa in tirada horyaal oo hadda soo bandhigay. (Your tirada laga yaabaa in aan anigaa dhigma sababtoo ah waxaan daray koob yar caado inaan nidaamka.)
Aan si aannu qubo daro horyaalka gebi sharci doqonimo ah - daruuro jiita ka Browser Title iyo meel ka sarreeya clip ah ee meesha aad rabto in aad horyaalka si ay ugu muuqdaan.
FIIRO GAAR AH: Waxaan isticmaalaya calaamad in Timeline ah si ay u caawiyaan i heli meel ka mid ah in clip si darbo screen way joogto ah. Calaamadood oo aan loo baahnayn si kasta oo horyaalka.
Um, haa. Sidaas, koob oo qaar ka mid ah eegto more xirfad badan kuwa kale ... waad tirtiri kartaa horyaalka hadda.
Ku dar horyaal oo isticmaalaya tabo gaaban keyboard
Horyaal Jiid ka Browser Title ah
Hadba dhinac ay jiidayeen horyaalka
Beddel duration by jiidayeen cidhifka clip ah
Delete horyaalka ah adigoo dooranayo oo ku cidhiidhinaya fure u tirtirto
Ku dar horyaalka cusub screen-buuxa ah (ku qor Control + T) in Timeline ah. Si aad u bedesho qoraalka ee horyaalka ah, waxa ay double-riix in daawadayaasha. Halkan, waxaan aan horyaalka si ay u bedelay "An xargaha Adventure."
FIIRO GAAR AH: Waxaan sidoo kale ka bedeli kartaa qoraalka isticmaalaya Isbatooraha ah. Waxaan idin tusin doonaa sida a weedho yar. Soo qaado hadba qaabka ugu fudud ee aad u.
Qoraalka oo dhan, in kasta oo horyaalka, waa la bedeli karaa by waxaa double-riixaya in daawadayaasha in ay doorasho, ka dibna aad qortid qoraalka cusub ee aad rabto in aad isticmaasho.
Waxaad qaab karaa qoraalka kasta oo aad dooran kartaa. Taas macnaheedu waa in aad qaab karaa weedho oo dhan, erayada, ama warqado shaqsi ka duwan. Wixii maqaalkan, waxaan qaab doonaa wax walba oo la mid ah, maxaa yeelay, mar alla markaad ogaato sida tani u shaqayso, waxaad tijaabiyaan kartaa adiga kuu gaar ah.
Halkan, waxaan xushay horyaalka aan dhammaan iyo Isbatooraha ah (toobiye Lauch + 4) furay. Riix tab Text oo ugu sarreeya. Qaybtan Isbatooraha ee kuu ogolaanaya in aad qaab qoraalka.
FIIRO GAAR AH: box Qoraalka dhow sare ee guddiga waa meesha labaad ee aad dooran kartaa qoraalka ah ee formatting.
Haddii aad rabto in aad jidka u soomi qaab qoraal ah, ereyga "Normal" guji ugu sareysa. Tan waxay ku tusaysaa menu ka buuxaan qaabab qoraal oo kala duwan. Qaar ka mid ah qaabab kuwaas eegi quruxsan looga cabsado, inta ka eegto ka xun.
FIIRO GAAR AH: Waxad abuuri kartaa Hababka text kuu gaar ah. Tixraac Help for macluumaad ku saabsan sida.
Qaybta aasaasiga ah ee Isbatooraha ee kuu ogolaanaya in aad bedesho noocyada, size, in lays ... dhan font goobaha caadiga ah aan ku aragno barnaamijyada kale. Halkan, waxaan font ku bedeshay in ay Hobo STD, at 167 dhibcood.
Inkasta oo qaar badan oo ka mid ah goobaha aad ogtahay waxaa dhowr ah waa laga yaabaa in aadan:
Line kala dheereynta. Habaysaa masaafada u taagan dhexeeya khadadka meel kale la mid ah.
Socodka. Habaysaa dheereynta Jiifta ee u dhexeeya xarfaha.
Gundhiga. Habaysaa dheereynta jiiftada ah qoraalka la barbar dhigo line Jiifta ee socda ilaa bartamaha goobada cad in daawadayaasha.
Qaybta wajiga oo noo ogolaadaa in la beddelo midabka font, opacity iyo buluug ah. Sharaxaad iyo siyasad noo ogolaadaa in ay ku darto, ma yaab leh, qeexaysaa iyo glows. Waxaad qabsato kartaa sida aad ka arki taam - Waxaan u muuqdaan in aan ku daro dulmari ama glows.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan si adag ugu talinaynaa ku daray Hooskooda dhibic qoraalka oo dhan in aad rabto in aad daawadayaasha in ay akhriyaan. Video, xitaa HD video, waa xal u yar marka la barbar dhigo daabacan. Rid Hooskooda aad qoraalka inta badan ka sahlan in la akhriyo. Kuwani waa goobo aan talinaynaa Hooskooda dhibic.
Ka dib markii samaynaya isbedela yaryar ee Isbatooraha ah, halkaan natiijada kama dambaysta ah. Aad u qabow - iyo aad uga duwan halka aan bilaabay!
ACTION SAFE / JAGO degaanno ammaan ah
Tan iyo markii ugu horeysay ee telefishinka ayaa la Been abuurtay, waxaan loo baahan yahay in ay mag-duwanaanshaha ee nooc TV sameynaya muuqaallo kale in ay sii joogaan xuduudaha Action Safe iyo Title Safe gudahood.
Inkasta oo inta badan video maanta waxaa loogu talagalay internetka, koob oo aad eegi doonaa sida ugu fiican haddii aad raacdo tilmaamaha isla.
Tag Switch ee daawadayaasha iyo dooro "Show Action Safe / Title Safe Zones."
Tan waxay ku tusaysaa laba laydiga caddaado in jir ah. Laydi dibadda loo yaqaan "Action Safe," mid ka mid ah gudaha waxaa lagu magacaabaa "Title Safe." Action Safe waa 5% in ka dhan geesaha; Title Safe waa 10% in ka dhan geesaha.
Marka la qorshaynayo qoraalka iyo naqshadeynta loogu internetka, dhawraan unugyo assaasi gudaha laydi dibadda. Marka la qorshaynayo sawiro iyo qoraal ah ee warbaahinta ama cable, dhawraan unugyo assaasi gudaha laydi iyo barxadda gudaha.
Halkan, tusaale ahaan, ogsoonow in aan horyaalka si buuxda jira gudahood Action Safe.
Horyaal siinayo barnaamijyada qof iyo shakhsiyadda, oo lagu daray ay sharax waxa socda si ay dhagaystayaasha. Final Cut Pro X bixiyaan fursadaha formatting si ay u sameeyaan naga text eegi weyn.
Sida loo soo dejinta Music ka Lugood galay Pro Goo Final
Sida loo soo dhoofsadaan avi in ​​imovie
> Resource > FCP > Sida loo dar horyaal ee Final Cut Pro X